EVY's Kitchen: ငါးခြောက်ထမင်းကြော်/ Fried rice with salted fish
လွယ်လွယ်ကူကူ ငါးခြောက်ထမင်းကြော်လေးပါ။ ကြော်နည်းကတော့ လွယ်လွန်းလို့ ရေးရမှာတောင် အားနာမိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မကလည်း ချက်သမျှလေးတွေ မှတ်တမ်းတင်ထားချင်တော့လည်း မနေနိုင်ပဲ ဘလော့ထဲတင်မိပြန်ပါတယ်။
တစ်ယောက်စာဆိုတော့လည်း ထမင်းလဲ ပန်းကန်လုံး တစ်ဝက်လောက်ပဲသုံးပါတယ်။ ပထမဆုံး ငါးခြောက်လက်တစ်ဆစ်စာလောက်ကို သေးသေးလေးတွေလှီးထားပြီး အရင်ဆီပူပူမှာကြော်ပါတယ်။ နောက် အသီးအရွက်ကိုရောထည့်ပြီး ၂ မိနစ်လောက်ကြော်ပါတယ်။ နောက်တော့ ကြက်ဥကိုထည့်မွှေလိုက်ပြီး ထမင်းကိုနောက်ဆုံးမှ ထည့်ပါတယ်။ ပဲငံပျာရည်အကြည်၊ ကြက်သားမှုန့်အနဲငယ်ထည့်ပြီး ၂ မိနစ်လောက်နေရင် ရပါပြီ။ ငါးခြောက်ပါနေတော့ သိပ်ငံသွားမှာစိုးလို့ ဆားမထည့်တော့ပါဘူး။ စားလို့တော့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
It wasasimple dish that I cooked for my weekend lunch. Not many ingredients were used, but the taste was so good that I am going to make it again very soon. Besides, it took me only 10mins to complete this dish. I used only 1/2 cup of cooked rice ( obviously 1 serving ), some mixed veggies (frozen), an egg and finallyasmall amount of salted fish. The best thing about the dish is the salted fish, which make the fried rice even tastier than ever.
My simple preparation steps as follows: First, cut the fish into small pieces (sorry I cant remember the exact weight of the fish that I've used). Then heatatable spoon of oil in wok and fry those fish till fragrant. Then add mix veggie and stir fry it for about2min with the lid on. Next, add the egg and continue to fry until they are fully cooked (about 1 min). Finally add in rice together with 1/2 Tbsp of light soy sauce as well as 1/2 tsp of seasoning powder and fry for about another2mins. Dish out and ready to serve.
Posted by Evy at 9:02 PM
ငါးခြောက်က ငါးပုတ်ခြောက်သုံးတာလား...။ ငါးခြောက်ရဲ့အငံနဲ့ ကြက်ဥအစိမ့်အရသာလေးတွဲလိုက်တာ့ ထမင်းကြော်လေးက တော်တော်စားကောင်းသွားပြီ...။ ကြိုက်တယ်..း)
မိုးငွေ့ ငါးပုတ်ခြောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ ဘာငါးလဲသေချာမသိဘူး။ သူငယ်ချင်းလက်ဆောင်ပေးထားတာ :D
Evy ရေ- ကြော်ထားတာလေးက စားချင်စရာအရမ်းကောင်းတာပဲ...း)
so deliciouas and tempting recipes.I liked your blog..Happy to follow you.Do visit my blog in your free time.
Hi All, Thanks much for your kind compliments. Love it. :-). Haveanice day!
အီဗီ ဂွတ်အိုင်ဒီယာ တူ ရိုက် အင် ဘိုင်လင်ဂွယ်
WOW! Looks so yummy and colourful. Love it!
Your fried rice look so yummy!
This is always fav fried rice andatypical plate of salted fish fried rice is usually AUD$10 per serve because salted fish is very expensive in Melbourne.